Xaflad Lagu Furaayo Xafiiska Somaliland Ee Taiwan Oo Maanta Ka Dhacday Taipei | Gaaroodi News
Xaflad Lagu Furaayo Xafiiska Somaliland Ee Taiwan Oo Maanta Ka Dhacday Taipei
Waxaa magaalada madaxda Taiwan ka dhacday xaflad xarigga looga jarayay oo lagu furaayo xafiiska wakiilka Jahuuriyadda Soomaaliland.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu ayaa ka qeyb galay xafladdii lagu furayay xafiiskaasi soomaaliland ay ku yeelan doonto magaalada Taipei.
Mr Wu oo khudbad ka jeediyay halkaasi ayaa yiri “Taiwan waa gurigiinii labaad!”
“Anaga iyo kuwa aan isku fikirka nahay waxaan hormarinaynaa nabadgalyada, barwaaqada iyo anaga oo ilaalinaynaa hab noolaleedkeena dimuqraadiyada,”ayuu intaa ku daray Mr Wu.
Sida uu qoray bogga Taiwan news waxaa sidoo kale xaflada lagu furayay xafiiska Soomaaliland ee Taiwan goobjoog ka ahaa wakiilka Soomaliland u fadhin doona magaalada Taipei Mohamed Omer Hagi.
Waxaa goobtii ay ka dhacaysay xafladda lagu furayay xafiiska Soomaaliland sidoo kale laga siidaayay muuqaalka khudbad horey loo sii duubay oo jeedinayay madaxwaynaha Soomaliland Muuse Biixi Cabdi.
“Maanta waxan aad ugu faraxsanahay aana soo dhaweynayaa aan u hambalyaynayaa dowladda Taiwan in ay si rasmi ah u aqbasho inay furto xafiiska,”ayuu yiri Mr Biixi.
Waxaa uu khubadiisa ku sheegay in labada dhinac ay dimuqraadiyada iska kaashan doonaa, ayna wadaagi doonaan arrimaha dhaqaalaha, ganacsiga iyo iskaashiga hormarka labada dhinac.
Madaxwayne Biixi ayaa waxau sidoo kale khudbadiisa ku sheegay in xiriirka laba geesoodka ah ee u dhaxeeya labada dhinac uu yahay mid ku saleysan mabaadi’da ay wadaagaan ee ku qotoma xorriyadda iyo dimuqraadiyadda.
17 bishii Augst ayaa waxay xukuumadda Taiwan xafiis wakiileed ka furatay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland.
Markii ay bishii July ku dhawaaqeen Taiwan iyo Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida inay xiriir laba geesood ah yeelan doonaan ayaa waxaa arrintaa ka dhalatay cambaareyn.
Canbaareynta ayaa ka timid Shiinaha iyo dowladda fedaraalka ee Soomaaliya oo labadaba ku baaqay in la ilaaliyo madaxbananida iyo midnimada dalalkooda.
Xukuumadda Shiinaha ayaa rumaysan in jasiiradda Taiwan ay ka mid tahya dhul waynaha Shiinaha.
Madaxweynaha hadda ee Taiwan, Tsai Ing-wen
Taiwan waxay markasta ka feejigantahay suuragalnimada weerar kaga Yimaada dowladda Shiinaha.
Sababaha Shiinaha uu guusha u gaarayo waxay tahay in uu diiradda saaro maalgashiyo ballaaran oo balaayiin dollar ay ku bexeyso taas oo deyn ku ah dalalka Afrika, iyo galaangal militari ee uu leeyahay